Kambani yeDe Beers Yoti Haisi Kuzotenga Mangoda ekwaMarange
Mbudzi 14, 2011
Forevermark inoti inotenga chete mangoda anobva kunzvimbo dzine vanhu vari kubatsirwa nekutengeswa kwemangoda
Kambani yeForevermark, iyo inotengesa zvishongo zvinogadzirwa nemangoda anobva kukambani huru inotenga mangoda yeDe Beers, inonzi yakati haisi kuzotenga mangoda ekwaMarange kunyangwe hazvo sangano reKimberley Process rakati mangoda aya achitengeswa pamisika yepasi rose.
Chief Executive veForevermark VaStephen Lussier vanonzi vakataura muSouth Africa mukupera kwesvondo kuti ivo sekambani inotengesa zvishongo zvemangoda zvepamusoro, havasi kuzobata mangoda ekwaMarange sezvo ari maduku uye asina kusvika sezvavanoda.
Vanonzi vakatiwo vanoda kushandisa mangoda akachena uye abva kunzvimbo kune vanhu vakagara zvakanaka vari kusimudzirwa nemangoda ari kubva munzvimbo yavo.
Gurukota rezvemigodhi VaObert Mpofu vati mangoda eZimbabwe, kunyanya ekwamarange, haasi kuzoshaya kwekutengeserwa nekuti arambwa neDe Beers.
VaMpofu vati kambani iyi yakaba mangoda ekwaMarange akawandisa kare. De Beers inoramba kuti yakaburitsa mangoda ekwaMarange munyika zvisiri pamutemo.
Vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reCentre for Research and Development, VaFarai Maguwu vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti kunyange hazvo Kimberley Process yakapa mvumo kuZimbabwe yekutengesa mangoda ekwaMarange, pachine vamwe vasati vagutsikana nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika.